गीत/संगीत Archives - Page 25 of 35 - Purbeli News
बाेकेदाह्रीले ल्याए नयाँ गित : बाहुनलार्इं यसरी गरे ब्यग्य ( भिडियाे )
“छुकछुके रेल” गीतको भिडियो सार्वजनिक
पछिल्लो पटक नेपाली गीत संगीतमा फरकपन,फरक स्वाद पस्किने होडनै चलेको छ । देश-बिदेशमा आयोजना हुने विभिन्न मेला महोत्सवमा स्टेज तताउने खालका गीतको माग अनुसार गीतकार तथा संगीतकारहरुले यतिबेला आफ्ना सृर्जनाहरुमा परिस्कृत गरिरहेका छन् । यसकै निरन्तरता स्वरुप एस.आर.एस. इन्टरटेन्मेंटको ब्यानरमा गायिका:रमिला ग्याङग्मी मगरको आवाज रहेको "छुकछुके रेल" बोलको गी...
‘नाईं मलाई थाहा छैन’ डान्स प्रतियोगिताको उत्कृष्ट भिडियो : प्रतियोगिताको उपाधि दुइ भाइले चुम्ने
काठमाण्डाै । बाबा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सिडनी, अष्ट्रेलीया र काठमांडु, नेपालको प्रायोजनमा भएको ‘नाईं मलाई थाहा छैन’ अन्तरराष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगिताको बुधवार १० वटा उत्कृष्ट भिडियो सार्वजनीक भईसकेको छ । १ जनवरी २०१७ देखि ३१ मार्च २०१७ सम्ममा देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट प्राप्त ४० वटा भिडियो मध्ये उत्कृष्ट १० वटा भिडियो बैशाख ६ गते, बुधवार गा...
धाेबिनिमा मेलिना, दिपक र बिनाेदकाे धमका
पथरी। माेरङकाे धाेबिनिमा सिरिजङ्गा युवा क्लवकाे अायाेजनामा नव बर्ष सांगीतिक साँझ २०७४ मनाईएकाे छ । सिरिजङ्गा शालिक निमाणकाे सयाेगार्थ सागितीक साझमा स्थानीय कलाकार तथा सागितीक क्षेत्रमा याेग्दान पुर्याउने विशिष्ट ब्याक्ती हरुलाई सम्मान गरिएकाे थियाे । कार्यक्रममा कलाकार दिपक राई, मेलिना राई, बिनाेद खम्बु, कुशल थुलुङ, नरेश लिङ्गदेन, एकदेब लिम्बू र सु...
नारायणलाई कृष्टिनाको याद रोएरै मेटिएला त ?
काठमाडौं। कसैले कसैको याद रोएर मेटाउन सक्दैन । जति रोयो उती अतितका यादहरु बल्झन्छ र झन धेरै रुन मन लाग्छ । यो संसार स्वार्थी संसार हो । कसैको आँसुले यहाँ कसैलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन । रुनेको एकोहोरो आँसु मात्र झरिरहन्छ । उता निर्मोही भने अरु कसैसँग मस्तिमा व्यस्त भईरहेको हुनेछ । भनिन्छ आँसुको मोल अमूल्य हुन्छ तर यहाँ आँसुको मोल हाँसो भन्दा सस्तो...
क्षितिज कुलुङ्गको नयाँ म्युजिक भिडीयो सार्वजनिक
संखुवासभा माङ्तेवा स्थाई घर भई बिगत दश बर्षदेखी निरन्तर सङीत श्रृजनामा सकृय गायक कुलुङ्गले ‘आकाशै बाट​’को म्युजिक भिडीयोलाई म्यूजिक नेपालबाट हालै सार्वजनिक गरेका छन् । ऋिषि जमर्कट्टेलको शब्द तथा ध्रुव डी – वानको सङीत रहेको गीत ‘आकाशै बाट​’को म्युजिक भिडीयोलाई रोशन तामाङ्गले निर्देशन गरेका हुन​। सागर गौतमको छाँयाकन रहेको गीतको भिडियोलाई निशान घिमिर...
मुना थापा मगर रुदेै भन्छिन् तिमीलाई सम्झी बस्छु प्रदेशी
काठमाडौँ। चितवन चण्डीभञ्ज्याङ ३ घुर्केसमा जन्मनु भएका नव सर्जक प्रयास गुरूङले अाउँछ प्रदेशी गीत लिएर बजारमा अाउनु भएको छ। यस गीतमा नव सर्जक गुरूङलको निकै मार्मिक शब्द सिर्जना रहेकाे छ। लय सिर्जना अहिलेका चर्चित गीतकार रिजन राना मगरको रहेको छ। मुना थापा र संगम गुरुङको सुमधुर अावाज रहेको यस गीतमा गीतकार प्रयास गुरुङका कान्छा भाई समीप गुरुङ र...
काठमाडौं, २१ चैत । सांगीतिक यात्राको एक दशक लामो यात्रामा थुप्रै प्रकारका गीत गाएका युवा गायक कमल श्रेष्ठको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकसँग आबद्ध सक्रिय सञ्चारकर्मी पनि रहेका श्रेष्ठको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘लजालु रुप’ आइतबार भाइब्स क्रिएसन मार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो । आधुनीक गीत–संगीतमा राम्रै जमेका गायक श्रेष्ठले व...
गोकुलममा २ रुपियाँको ‘कुटुमा कुटु सुपाडी दाना’
इटहरी / पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको कथा बोल्ने फिल्महरू निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्ता फिल्महरूमा नेपालीजनले बोल्ने टिपिकल शब्दहरू टप्पक टिपेर गीत बनाई समावेश गर्ने चलन पनि बढिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली समाजका अर्गानिक कथावस्तु समावेश गरिएका फिल्महरूमा स्रोता तथा दर्शकहरूको मन जित्न माहिर देखिएका राजनराज सिवाकोटी र कालिप्रसाद बाँस्कोटाले सिर्जना...